Naya course » कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने अनुभुति दिलाउने छु ः चापागाई कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने अनुभुति दिलाउने छु ः चापागाई – Naya course
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने अनुभुति दिलाउने छु ः चापागाई
पश्चिम नेपालमा एक मात्र (कटिया हाउस)का संचालकका रुपमा परिचत युवा व्यवसायी ओम प्रकाश चापागाई कोहलपुर उद्योग वाािण्ज्य संघको निर्वाचनमा सदस्य पदको प्रत्यासी छन् । खुल्ला तर्फ कार्य समितिको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उनी भोट माग्न मै व्यस्त छन् । लामो समय बैदेशिक रोजगारीमा बिताएका उनी अहिले कोहलपुरमा भिन्न प्रकारको व्यवसाय गर्छन् । कोहलपुर २ को मनकामना चोकमा उनको होटल डिभाइन डिस (अर्गानिक किचन) सञ्चालन छन् । ।यसका सञ्चालक चापागाई उर्जाशिल र जुझाउ युवाको पहिलो पटक सदस्यको लागि उम्मेदवारी हो । कुनै बेला स्वदेशमा व्यवसाय गर्नको लागि आर्थिक नहुँदा विदेश जानु परेको बताउने उनी अहिले आठ जनालाई रोजगारी दिन समेत सफल छन् । कोहलपुर उवासंघको निर्वाचन र उनको उम्मेदवारीसँग केन्द्रीत रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः–
म सानै उमेरदेखि नै धेरै दुःख गरेको मान्छे हो । कुनै बेला म सँग व्यापार गर्नको लागि पैसा नभएर विदेश जान बाध्य भएको व्यक्ति हो । केही समय विदेशमा दुःख गरे, पसिना बगाए । आठ वर्ष मलेसिया गएको थिए । त्यहाँ मैले सिनियर डिपार्ट हेडको रुपमा समेत काम गर्ने अवसर पाएको थिए । त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाए । फेरी स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्वदेश फर्किए । अहिले भर्खरै स्थापित हुन लागेको व्यवसायी हो म । अहिले आफ्नै देशमा आठ जनालाई रोजगारी दिन सफल भएको छु । मैले अव पैसा नभएकै कारण विदेश जान नपरोस । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना होस भन्नको लागि उद्योग वाणिज्य संघमा उम्मेदवारी दिएको हो । मैले जिते भने ती यूवाहरुको विषयमा पैरवी र वकालत गर्नेछु । सानो पद छ , मेरा ठूला योजना छन् ।
२. उद्योगी व्यापारीसंगको भेटमा के कस्ता सुझाव आउने गरेका छन् ?
तपाई त कटिया हाउस संचालक होइन र भन्दै धेरै साथीहरुले चिन्नु हुनेरहेछ निकै खसी लागेको छ । व्यवसायीहरुका समस्या धेरै छन् । भेटघाटको क्रममा हामीलाई धेरै समस्याहरु सुनाउनु हुन्छ । उनीहरुले अपनत्व खोजिरहेका छन् । उहाँहरुले हामी किन त्यहाँ संगठित हुने, अहिले सम्म उद्योग वाािण्ज्य संघले हामीलाई के दिएका छन् र भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीलाई उहाँहरुका चिन्ता नगर्न भनेका छौ । हामीलाई जिताउनुहोस हामी तपाईहरुका माग सम्बोधन गर्न तयार छौ । अहिले जुन हाम्रो टिम र हामीले उठाएको मुद्दा छ त्यो व्यवसायीहरु कै हितका लागि हो । त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई आस्वस्त बनाएका छौ । केही युवा व्यवसायीहरुका जोस र जाँगरले हामीलाई प्रभावित गरेको छ । उहाँहरुले हामीलाई समर्थन गर्नु भएको छ ।
४. चुनाव जित्नेमा कत्तिको विस्वस्त हुनुहुन्र्छ ?
हामीसँग एउटा सक्षम नेतृत्व छ । जसले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापनादेखि यहाँ सम्म ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । उहाँलाई अहिले व्यवसायीहरुले निकै भरोसा समेत गरेका छन् । हामी पनि विभिन्न क्षेत्रमा दुःख गरेर माथि उठेका साथीहरु छौ । त्यसैले यसपटक मतदाताले हामीलाई भोट दिन्छन् । म विश्वस्त छु
५. तपाई पहिलो पटक कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा होमिनु भएको छ । संघमा गएमा युवा लक्षित कार्यक्रम के गर्नु हुनेछ ?
निकै सान्र्दभिक प्रश्न गर्नुभयो , म हिजो वैदेशिक रोजगारीमा निकै दुख गरेर आएको युवा हुँ । यस क्षेत्रमा धेरै अनुभव समेत सम्हालेको छु । त्यसैले मेरो प्राथमिकता नै युवाहरुको विषयमा पैरवी गर्ने हुनेछ । यस्तै व्यवसाय आर्थिक अवस्था सँग जोडिएको कुरा हो । जबसम्म हामी सफल हुदैनौ तब सम्म देश सफल हुन सक्दैन । गाउँका टोलमा पुग्दा युवाहरु व्यवसायमा जुटिरहेको देख । मलाई एकदमै खुसी लागेको छ । त्यसैले मैले जितेर गएमा उनीहरुलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने विषयमा नै सोच्नेछु । युवाहरुलाई अघि बढाउने छौ ।
६. अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संसारमा सबै चीज किनेर पाइन्छ । तर भोट मात्रै यस्तो चिज हो । जुन मागेर मात्रै पाइन्छ । नाई नभन्नु ल……